अझै सकिएन प्रधानमन्त्रीको किड्नी काण्ड ! प्रधानमन्त्री आफैंले मुख खोले - HelloKhabar
अझै सकिएन प्रधानमन्त्रीको किड्नी काण्ड ! प्रधानमन्त्री आफैंले मुख खोले
२०७७ पुष १९, आईतवार २१:२३
काठमाडौं । केही दिन अगाडीको कुरो हो– नेकपा नेता भिम रावल सुदुरपश्चिम गएका थिए । त्यसक्रममा भिजिटर बढाएर डलर कमाउने उद्देश्यले खोलिएको एउटा अनलाइनले नेता रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा स्त्रीको अङ्ग मिसिएकोले दिमागले काम गरेन भनेको भन्दै समाचार लेख्यो । उक्त अनलाइनको स्क्रिनसट एकैछिनमा निक्कै भाइरल बन्यो ।
ठुला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिले पनि त्यहीँ समाचारलाई आधार मानेर भिम रावलले महिलालाई होच्याएको भन्दै रावलको चर्को विरोध गरे । तर, रावलले उक्त विषय आफूले नबोलेको भन्दै स्पष्टिकरण दिए भने कुप्रचार गरिएको बताए । उक्त दिनभरीको रावलले गरेको भाषणको भिडियोमा पनि ती विषय बोलेको कहीँ पाइएन । पछि उक्त अनलाइनले माफी माग्दै उक्त कुरा भिम रावलले नभनेको स्पष्टिकरण दियो । त्यससँगै सेलाएको उक्त विषय फेरि सतहमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त फेक समाचारकै विषयलाई लिएर पुनः भाषण गरेका छन् । आइतबार राजधानीको कार्की ब्याङ्क्वेटमा भएको अनेरास्ववियूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषय फेरि उठाए ।
‘एउटा नेताले चर्को भाषण गरेछ। केपी ओलीमा महिलाको किड्नी लगाएर दिमाग नै बिग्रियो भनेर। महिलाको किड्नी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिलेदेखि नै के होला’, ओलीले भने, ‘म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ। महिलामाथि कत्रो अपमान हो। महिलाको त किड्नीमात्र लगायो भने पनि मान्छे पागल हुन्छ अरे।’ उनले भाषणमा रावलको नाम भने लिएनन्। तर व्यक्तिगत टिप्पणी गरे।
ओलीले अझै त्यस विषयमा केन्द्रित हुँदै भने ‘त्यो दिन बेलुका श्रीमतीले कसरी खान दिइन् होला अचम्म लाग्छ। घरमा पुग्दा ढोका खोलेर स्वागत कसरी गरिन् होला। अचम्म लाग्छ। वरिपरि झ्यालबाट हेर्ने दिदी बहिनी महिलाहरूको अगाडि अनुहार कसरी देखाए होलान् ।’
मुख्य समाचार हेलाेखबर - २०७७ पुष १९, आईतवार २१:२३
आर्थिक २०७७ पुष १९, आईतवार २१:२३
मुख्य समाचार २०७७ पुष १९, आईतवार २१:२३
ब्यानर २०७७ पुष १९, आईतवार २१:२३